Nhasi izuva rekutanga chigamba chegore ra2021.Microsoft yakaburitsa matsva ekuchengetedza uye zvisiri zvekuchengetedza zvemakambani Windows inoshanda sisitimu uye zvimwe zvigadzirwa zvekambani seMicrosoft Office.
Muchirongwa ichi, iwe unowana tarisiro izere yezvinhu zvese zvakakosha maererano nesarudzo dzakaburitswa. Isu tinokupa pfupiso yepamusoro, zvinongedzo kumapeji ekutsigira, zvinongedzo zvekudhawunirodha, runyorwa rwezvinhu zvinozivikanwa, kugoverwa kwekushupika kweimwe neimwe sisitimu yeshanduro inotsigirwa, nezvimwe.
Tarisa uone yaDecember 2020 Patch pfupiso kana iwe wakarasika.
Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kuvandudzwa Ndira 2021
Iwe unogona kudhawunirodha inotevera Excel spreadsheet kune yako system; ine runyorwa rweakaburitswa ekuchengetedza ekuvandudzwa kweMicrosoft Windows chikuva. Dzvanya pane inotevera chinongedzo kuti utore kune yako system: Zvekuchengetedza Kugadziridza 2021-01-12-083940pm
Microsoft yakaburitsa zvidzoreso zvekuchengetedza kune vese vatengi vakatsigirwa uye server Windows zvigadzirwa.
Hapana zvakatsoropodzwa kukanganiswa kwevatengi uye server shanduro dze Windows.
Zvekuchengetedza zvigadziriso zvinowanikwawo kuMicrosoft Office, Microsoft Edge, Azure, Visual Studio, Windows Codecs Raibhurari, SQL Server, Microsoft Malware Kudzivirira Injini, .NET Core, .NET Repository, uye ASP .NET
Windows 7 (yakawedzera rutsigiro chete): Kuchengetedzwa kwe5: 0 yakakosha uye 5 yakakosha
Windows 8.1: Kuchengetedzwa kwe7: 0 yakavoterwa yakakosha uye 7 yakatarwa yakakosha
Windows 10 vERSION 1809: Kuchengetedzwa kwe13: 0 yakakosha uye 13 yakakosha
Windows 10 shanduro 1903 na1909: Kuchengetedzwa kwe13: 0 yakakosha uye 13 yakakosha
Windows 10 vhezheni 2004 uye 20H2: 13 kudzvinyirira, 0 yakakosha, 13 yakakosha
Windows Server 2008 R2 (yakawedzera rutsigiro chete):5 kudzvinyirira: 0 yakakosha uye 5 yakakosha
Windows Sevha 2012 R2: Kuchengetedzwa kwe8: 0 yakakosha uye 8 yakakosha.
Windows Server 2016: Kuchengetedzwa kwe8: 0 yakakosha uye 8 yakakosha.
Windows Server 2019: Kuchengetedzwa kwe8: 0 yakakosha uye 8 yakakosha.
Internet Explorer 11: hapana chakanyorwa
Microsoft Edge (yechinyakare): 1 kudzvinyirira: 1 yakakomba
CVE-2021-1705 - Microsoft Edge (HTML-yakavakirwa) Ndangariro Yehuwori Inotambura
ona pano (ichangoburwa chengetedzo kubva kuChromium projekiti)
Windows 7 SP1 uye Windows Sevha 2008 R2
Mwedzi Uno Rollup: KB4598279
Kugadziridza uye kugadzirisa:
Inogadzirisa chengetedzo yekupfuura muPrinta Remote Maitiro Ekufona. Maona Kugadzirisa kuendeswa kwePrinta RPC inosunga shanduko yeCVE-2021-1678 kune rumwe ruzivo. (pamwedzi-kutenderera chete)
Inogadzirisa chengetedzo yekusagadzikana nyaya muHTTPS-based intranet server. HTTPS-yakavakirwa intranet maseva haigone kushandisa mushandisi proxy kuti itarise zvigadziriso nekumisikidza mushure mekuisa iyo yekuvandudza. Hunhu hunoda kugadziridzwa kana zvichidikanwa. Ona "Shandisa scan shanduko uye zvitupa zvinowedzera chengetedzo ye Windows zvishandiso zvinoshandisa WSUS yekuvandudza”Kuti uwane mamwe mashoko. (pamwedzi-kutenderera chete)
Mwedzi Uno Rollup: KB4598285
Rutsigiro Peji: KB4598230
Kufanana kwekuchengetedzwa kwekudarika uye chengetedzo yekushomeka nyaya gadzirisa senge iri Windows 8.1 uye Windows Sevha 2012 R2
Yakagadzirisa nyaya inogona kutumira anodhinda mabasa kune isiriyo yekudhinda mutsara.
Yakagadzirisa nyaya ne chkdsk / f inogona kukuvadza iyo faira sisitimu.
Windows 10 shanduro 1903 na1909
Rutsigiro Peji: KB4598229
Windows 10 vhezheni 2004 uye 20H2
Rutsigiro Peji: KB4598242
Zvimwe zvidzidzo zvekuchengetedza
KB4598231 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1507
KB4598243 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows Server 2016 uye Windows 10 Version 1607
KB4599208 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1703
KB4598245 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1803
KB4598287 - 2021-01 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows Server 2008
KB4598288 - 2021-01 Security Monthly Quality Rambai Windows Server 2008
KB4598297 - 2021-01 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows Yakapetwa 8 Standard uye Windows Server 2012
Kumwe kuita senge kutumidzazve zita kungatadza paCluster Yakagovaniswa Mavhoriyamu. Nyaya yakamira kwenguva refu. Microsoft inokurudzira kumhanya mashandiro kubva kune imwe nzira ine mikana yakakwidziridzwa, kana kubva kunode isina muridzi weCSV.
Kugadziridza kunogona kutadza kana iyo system isingatsigire ESU.
Windows 8.1 uye Server 2012 R2
Yakareba-yakamira nyaya nemapepa emitauro yeAsia uye kukanganisa "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND". Microsoft inokurudzira kubvisa uye kuisa zvakare mapakeji emitauro uye nekuisa izvo zvitsva. Kana izvo zvikasabatsira, kudzoreredza zano rechipiri reMicrosoft.
Sisitimu uye zvitupa zvinogona kurasikirwa kana uchigadzirisa kubva Windows 10 vhezheni 1809 kana gare gare kune nyowani vhezheni ye Windows 10. Microsoft inokurudzira kudzokera kune vhezheni yapfuura ye Windows kana nyaya yacho yatove neruzivo.
Kushandisa Microsoft Japanese Input Method Edhita kunogona kukonzera hunhu hwakashata hwaFurigana kudzoserwa.
ADV 990001 - Dzazvino Kushandira Stack Dzidzo
KB4586875 - 2021-01 Yekuwedzera Kuwedzeredza kweNET Sisitimu 3.5 uye 4.7.2 ye Windows Server 2019 uye Windows 10 Version 1809
KB4586876 - 2021-01 Yekuwedzera Kuwedzeredza kweNET Sisitimu 3.5 uye 4.8 ye Windows Server, vhezheni 20H2, Windows 10 Shanduro 20H2, Windows Server, vhezheni 2004, uye Windows 10 Version 2004
KB4586877 - 2021-01 Yekuwedzera Kuwedzeredza kweNET Sisitimu 3.5 uye 4.8 ye Windows Server 2019 uye Windows 10 Version 1809
KB4586878 - 2021-01 Yekuwedzera Kuwedzeredza kweNET Sisitimu 3.5 uye 4.8 ye Windows Seva, vhezheni 1909 uye Windows 10 Version 1909
KB4597247 - 2021-01 Yekuwedzera Kuwedzeredza kweNET Sisitimu 4.8 ye Windows Server 2016 uye Windows 10 Version 1607
KB4597249 - 2021-01 Yekuwedzera Kuwedzeredza kweNET Sisitimu 4.8 ye Windows 10 Shanduro 1803 uye Windows Server 2016
KB4598499 - 2021-01 Yekuwedzera Kuwedzeredza kweNET Sisitimu 3.5 uye 4.7.2 ye Windows Server 2019 uye Windows 10 Version 1809
KB4597238 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 ye Windows 8.1 uye Windows Sevha 2012 R2
KB4597239 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 ye Windows Yakapetwa Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, uye Windows Server 2008
KB4597252 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 4.8 ye Windows Yakapetwa 8 Standard uye Windows Server 2012
KB4597253 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 4.8 ye Windows 8.1 uye Windows Sevha 2012 R2
KB4597254 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 4.8 ye Windows Yakapetwa Standard 7, Windows 7, uye Windows Sevha 2008 R2
KB4598500 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 ye Windows Yakapetwa Standard 7, Windows 7, uye Windows Sevha 2008 R2
KB4598501 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 ye Windows Yakapetwa 8 Standard uye Windows Server 2012
KB4598502 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 ye Windows 8.1 uye Windows Sevha 2012 R2
KB4598503 - 2021-01 Kuchengetedza uye Hwakanaka Rollup ye .NET Sisitimu 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 ye Windows Server 2008
Unowana ruzivo rwekufambisa Office pano.
Maitiro ekudhawunirodha nekuisa iwo Ndira 2021 ekuchengetedza ekuvandudza
Vatengi vhezheni dze Windows icha dhawunirodha nekuisa ekuchengetedza matsva otomatiki nekukasira. MaSystem anogona kugadzirirwa neimwe nzira, uye maneja anogona kumhanyisa cheki chemanyorerwo ekuvandudzwa kwekutora zvinyorwa. Iwo matsva anopihwa kuburikidza nekuvandudza manejimendi masevhisi senge WSUS futi.
Ongorora: tinokurudzira kuti masisitimu anotsigirwa pamberi pekuti chero gadziriso iiswe pavari. Windows inouya nekudzoreredza mashandiro, asi haisi 100% yakavimbika pane dzimwe nguva uye zvirinani kuve nekuchengetedzwa munzvimbo kuitira kana chimwe chinhu chikatadza panguva yekuvandudza.
Kuti umhanye bhuku rekuvandudza cheki, ita zvinotevera
Sarudza Kutanga, nyora Windows Gadziridza uye rova ​​iyo Windows Gadziridza chinhu chinoratidzwa.
Sarudza cheki kuti uwane zvishandiso kuti umhanye cheki chemanyorerwo.
Pazasi pane mapeji emidziyo neakananga kurodha pasi zvinongedzo, kana iwe uchida kudhawunirodha zvinyorwa kuti uzviise pamurume.
Windows 7 uye Server 2008 R2
KB4598279 - 2021-01 Security Monthly Quality Rambai Windows 7
KB4598289 - 2021-01 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows 7
KB4598285 - 2021-01 Security Monthly Quality Rambai Windows 8.1
KB4598275 - 2021-01 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows 8.1
KB4598230 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1809
KB4598229 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1903
KB4598229 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1909
KB4598242 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 2004
Windows 10 (vhezheni 20H2)
KB4598242 - 2021-01 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Shanduro 20H2
Ndinokutendai nekuve muverengengi weGhacks. The post Microsoft Windows Kuchengetedzwa Kuvandudza Ndira 2021 kuongorora yakatanga kutanga gHacks Technology News.